Amnesty oo ciidamada dalka Burundi ku eedeysey in ay dad shacab ah u laayeen si bareer ah. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Dhacdoyinka Caalamka Amnesty oo ciidamada dalka Burundi ku eedeysey in ay dad shacab ah...
Amnesty oo ciidamada dalka Burundi ku eedeysey in ay dad shacab ah u laayeen si bareer ah.
Hay’adda Amnesty International ayaa ku sheegay warbixin ay kaga hadlaysay xaaladaha dalka Burundi in ciidamada ammaanka dalkaas ay si xeeladeysan u dileen tobaneeyo qof oo shacab ah intii ay socdeen rabshadihii 11-kii bishan ka dhacay magaalada Bujumbura ee xarunta Burundi.
Amnesty ayaa warbixinteeda ku xustay in qaar ka mid ah dadkii rabshadaha ku dhintay loo dilay maalin keliya si sharciga ka baxsan. Iyadoo xustay in 87 qof oo siddeed ka mid ah ay ahaayeen ciidamada amniga Burund la dilay.
Deegaanada lagu dilay inta badan dadkan ayay hay’adu sheegtay inay kala yihiin; Musaga, Mutakura, Nyakabiga, Ngagara, Cibitoke iyo Jabe oo dhamaantood ka tirsan Bujumbura, iyadoo warbixintu ay intaas raacisay inay ka soo jeedaan dadkaas Tutsi oo ah qabiil looga tiro badan yahay dalkaas.
“Inta badan dadkan la laayay waaxa lagu qabqabtay howl-gal ay ciidamadu ka sameeyeen xaafadahaas, waxaana si bareer ah u toogtay ciidamada amniga dowladda,” ayay Amnesty International ku tiri warbixinteeda.
Hay’adda Amnesty ayaa warbixinta ku xustay in maydadka 21-qof oo laga helay qaar ka mid ah waddooyinka caasimadda Burundi 12-kii bishan ay ku jireen nin naafo ah, wiil yar oo iibinayay ukun, nin shaqaale ah, macallin & nin dhallinyaro ah oo taleefoono iibinayay.
Xukuumadda Burundi ayaan weli eedeymaha hay’adda Amnesty wax jawaab ah ka bixin; balse saraakiil u hadlay dowladda ayaa sheegay markii rabshadhuhu dhaceen in dadkii lagu dilay oo dhan ay ahaayeen xoogag hubeysan oo weerar saldhigyo ay ciidamada Burundi ku leeyihiin duleedka Bujumbura.
Sidoo kale, rabshado ayaa ka socday magaalada Bujumbura tan iyo markii madaxweynaha dalkaas Pierre Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu isku soo taagayo xilka madaxnimo bishii Abriil ee sannadkan.
Amnesty International ayaa ku sheegtay in warbixintan ay xaaladda Burundi uga hadashay ay ururinaysay muddo labo toddobaad ah, ayna wareysatay dad badan oo dhibannayaal ah iyo kuwo ehelladooda la laayay.
Ugu dambeyn, warbixinta hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo ururka Midowga Afrika uu toddobaadkii hore sheegay in dalka Burundi uu u dirayo 5,000 oo askari oo nabad-ilaalin ah, inkastoo ay ka soo horjeesteen in ciidamadaas Burundi la geeyo xukuumadda iyo baarlamaanka waddankaas.
Previous articleJabuuti oo uu R/Wasaaraheedu ka hadley rabshadihii ka dhacey dalka D/Jabuuti.
Next articleDagaal yahanada Daalibaan oo weerarey magaalada Sangins ee gobolka HELMAND.